Ra’iisul wasaare Kheyre oo si kulul u cambaareeyay qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ra’iisul wasaare Kheyre oo si kulul u cambaareeyay qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa si kulul u cambaareeyay qaraxyadii saakay ka kala dhacay qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa marka hore sheegay inuu aad uga xun yahay inay jiraan kooxo nabadda diidan islamarkaana doonaya daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed, wuxuuna wacad ku maray in arrinkaasi uu si deg deg ah wax uga qaban doonno.
“Waxaan aad uga xumahay falalkaan qaraxyada ah ee lagu dhibaateynayo shacabka Soomaaliyeed, waxaana ballan qaadayaa inaan xoogeena isugu geyn doono sidii aan gacan adag ugu qaban laheyn kooxahaan u ooman daadinta dhiiga shacacabka ah” Sidaas waxaa yiri ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre.
Dhinaca kale, ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa sheegay in xukuumadiisu ay muhiimad gaar ah siin doonto sidii loo xasilin lahaa dalka islamarkaana looga hortagi lahaa inay sii socdaan falalkaan lagu dhibaateynayo shacabka Soomaaliyeed.
Ugu dambeyntii, ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa tacsi u diray dhaamaan eheladda iyo qoysaska ay ka geeriyoodeen dadkii maanta ku dhintay qarxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho, isagoona dhinaca kale caafimaad u rajeeyay dadkii kale ee ku dhaawacmay qaraxyadaas.